Vabereki Voita Muonero Wakasiyana Pakukwidzwa kweMari dzeVana veChikoro
Vabereki vave kuita maonero akasiyana pamusoro pemari dzechikoro dziri kuwedzerwa zvichitevera kushaya simba kwedhora remunyika zvichienzaniswa nerekuAmerica.
Mumwe mubereki anoti hapana chakaipa kuti mari iwedzerwe ndiVaMusa Mandimika avo vane mwana anodzidza paNgezi High School kuMhondoro vati vakasabhadhara mari vana vanoyaura nenzara.
VaMandimika vanoti zvainge zvakanaka dai mari yechikoro yese ichibhadharwa nemari yekuAmerica iyo inodzikamisa mitengo yezvinhu asi vanoti zvinonetsa pachitariswa mari iri kutambiriswa vanhu munyika inenge iri mumadhora emunyika.
Asi mumwe mubereki ane mwana anodzidza paChinhoyi High School VaIsrael Nyandoro vanoti zvikoro zviri kungowedzera mari pasina kuwirirana nevabereki.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi nepamusoro VaTaungana Ndoro vanoti mari yedzidzo kana kuti school fees inongowedzerwa chete kana zvikoro zvataurirana nevabereki asi mari dzekuchengetwa kwevana pazvikoro kana kuti boarding fees hainei nekuwirirana sezvo vakuru vezvikoro vachiona zvakanakira mwana. VaNdoro vakurudzira vabereki kuti vaendese vana kuzvikoro zvinoenderana nhomwe dzavo.
Zvikoro handizvo chete zviri kuwedzera mari dzekubhadhara asi nevemapepanhau nevezvitoro vari kuita zvimwechetezvo.
Bepanhau reNewsday iro raisimbotengwa nemadhora emunyika anoita mazana matanhatu kana kuti ZWL $600 rave kutengwa nechiuru chemadhora emunyika kana kuti -ZWL$1000 kutanga nhasi.
Mumwe muverengi webepanhau reNewsday VaOnias Chafausipo vanoti havachakwanisa kutenga bepanhau ravanofarira nekuda kwemutengo.
Sachigaro werimwe boka revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa-MISA-VaGolden Maunganidze vanoti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekukwira kwemitengo yemapepanhau nemasaisai sezvo zvichiguma zvotyora kodzero dzevanhu dzekuwana mashoko ane chekuita nehupenyu hwavo.
Nyanzvi dzezvehupfumi dzinoti mitengo yezvinhu icharamba ichiita chamurambamhuru kana nyika ikaramba ichishandisa mari yemunyika asi mukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe VaJohn Mangudya vanoti havasi kuzodududza mukushandisa mari yemunyika.
Nezuro pamusika wemari yekunze weRBZ Auction rate dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora emunyika mazana matatu nemakumi matatu nemasere kana kuti ZWD338 kana kuti 1US$ to ZWD338. Pamukoto dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora mazana mana nemakumi mashanu kana kuti US$1 to ZWD450.